PressReader - Isolezwe: 2017-11-15 - UMbule ethubeni lokuvala isikhala sikaLetsholonyane
UMbule ethubeni lokuvala isikhala sikaLetsholonyane
Isolezwe - 2017-11-15 - EZEMIDLALO - MINENHLE MKHIZE LUNGILE MAJOKA
UYILUNGELE inselelo yokuvala isikhala sensika uRenielwe “Yeye” Letsholonyane umdlali osemncane weSuperSport United, uSipho Mbule.
Amatsatsantsa A Pitori azodudulana neTP Mazembe emdlalweni womlenze wokuqala wamanqamu weCAF Confederation Cup.
Izoya kulo mdlalo ngaphandle kukaMorgan Gould noYeye bobabili abadonsa izigwebo zamakhadi aphuzi.
Umdlalo ungeSonto ngo-3.30 ntambama eStade TP Mazembe, eLubumbashi, eDRC Congo. Owesibili uzodlalelwa eNingizimu Afrika ngoNovemba 25 ngo-8.15 ebusuku eLucas Moripe Stadium, ePitoli.
UMbule (19) okhona esikwatini seSuperSport esidlalla kwiConfederation Cup, ukutshele leli phephandaba ukuthi ukulungele ukuvala isikhala sikaYeye uma enikwa ithuba ngeSonto.
“Ngikulungele ukudlala uma nginikwa ithuba. Okungisebenzelayo wukuzikhandla ngoba ngisho sekuqediwe ukujima ngiyasala ngenze ezinye izinto.
Ukusebenza kwami kanzima ngingasho ukuthi kuthela izithelo. Lapha kwiSuperSport ngidlala nenqwaba yabadlali abakhonze ukulibeka phansi ibhola njengoYeye noTebogo Mokoena yingakho nami ngikhululeka uma lisezinyaweni,” kusho uMbule.
UMbule izinto zimhambela kahle. Kulo nyaka udlale kwiNdebe yoMhlaba ka-Under 20 kwathi kusenjalo wanyuselwa
eqenjini UKWENZA kahle kwamaqembu aseNingizimu Afrika emiqhudelwaneni yase-Afrika akwanele ukuqinisa iBafana Bafana ukuze ibange namanye amazwe kodwa kudingeka ukuthi kunyuke isibalo sabadlali baseNingizimu Afrika abayibamba kumaligi aphesheya kwezilwandle.
Lona ngumbono wengwazi yeBafana Bafana, uMark Williams, egcizelele elokuthi ngeke waqhathanisa umdlali odlala kumaligi akuleli nogijima phesheya.
UWilliams owadlala kwiWolverhampton Wanderers e-England, iCorinthians yaseBrazil nasemaqenjini aseChina, iChongqing neGuangdong elikhulu. Uthe efika kulona wahlabana ngesicoco seMTN 8 njengoba esezodlala kowamanqamu weConfederation Cup. “Izinto ziyasivuma. Njengamanje sesibheke ukunqoba lesi sicoco seConfederation Cup ngoba yisicoco iqembu elingakaze lisinqobe. Imimoya iphezulu eqenjini futhi sigcwele ukuzethemba. Ukuba yingxenye yeqembu emidlalweni yeCAF kungikhulise kakhulu ekubeni ngumdlali. Njengamanje sengiyazi ukuthi yini okumele uyilindele nokuthi kunjani ukuvakashela kwamanye amazwe,” kusho uMbule. Iningi labadlali abebeyibambe kwiNdebe yoMhlaba ka-Under 20 eKorea Republic benza kahle emaqenjini abo. Lapha sikhuluma ngabadlali uMokoena weSuperSport, Wiseman Meyiwa weKaizer Chiefs, Reeve Frosler weBidvest Wits, Grant Margaman we-Ajax Cape Town noSibongakonke Mbatha wePlatinum Stars. “Kuyangijabulisa ukuthi amajita amaningi ebesidlala nawo kwiNdebe yoMhlaba ayadlala emaqenjini awo. Kuyakhombisa ukuthi siyasebenza futhi sifuna ukuqhubeka nokwenza kahle uma sinikwa amathuba,” kusho uMbule.
THUMELA umbono ngalolu daba kuFacebook (Isolezwe), kuTwitter (@isolezwenews) noma umqhafazo ku-45773. I-sms ibiza R1,50. USIPHO Mbule weSuperSport United angase athole ithuba lokudlala uma sebebhekene neTP Mazembe kowamanqamu weCAF Confederation Cup...